Kabaha Xirfadlayaasha Pointe Kabaha Naqshadayaasha Soosaarayaasha - Warshadda Shiinaha â â Fit Warshad baleedka Fitdance.
Hoyga > Kabaha Qoob-ka-ciyaarka Kabaha Qoob-ka-ciyaarka > Kabaha Xirfadlayaasha Pointe
Waxaa la aasaasay 1999ï¼ŒFitdance warshad baleedka kaas oo ku takhasusay naqshadeynta, soo saarista iyo iibinta dharka qoob ka ciyaarka, sumcad weynna ku leh warshadaha juear qoob ka ciyaarka Shiinaha.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarno waxaa ka mid ah tuute-baleedka, dharka baleedka, goonnada baleedka, leotard qoob-ka-ciyaarka, canjeerada canjeerada iyo dharka kale ee qoob-ka-ciyaarka. Iyo kabaha baleedka, kabaha baleedka iyo qalab kale. Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyaa dalal iyo gobollo badan sida Waqooyiga Ameerika, Ruushka, Australia, Kanada, Japan, Kuuriyada Koonfureed, iwm.
Oo ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen macaamiisha dal iyo dibadba.
Waxaa jira laba saldhig oo wax soo saar oo ku yaal Guangdong iyo Hubei, oo leh 200 oo shaqaale ah.
Shaqaalaheennu waxay ka kooban yihiin nashqadeeyayaal heer sare ah, maamuleyaal iyo Suuqgeyaal kuwaas oo cayminkara adeegga qumman ee sarreeya iyo alaab tayo sare leh.
Halbeegyada Kabaha Baleedka
Waxyaabaha:Sare: Satin, Dahaarka: Tayada Sare ee Tayada, Dibedda: Waraaq Ubax Cufnaan Sare leh
Habka rarida:Taageerada Xawaaraha · Xamuulka badda · Xamuulka dhulka · Xamuulka hawada
Faa'iidooyinka Kabaha Baleedka
Waxay ku habboon tahay qoob-ka-ciyaarka leh xirfadaha qoob-ka-ciyaarka qaarkood waxaana loo isticmaali karaa wax-qabad ama tababar.
Adeegga iibka kadib ee Kabaha Ballet
Markay soo saarto nambarka amarka dhoofinta, waan kuu soo diri doonnaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah oo aan ula soconno dabagalkaaga.
Markay gaadho meeshii loogu talagalay, mar kale ayaan kula soo xiriiri doonaa si aan kuu xusuusino risiidka.
Su'aalaha iyo jawaabahaKabaha Baleedka
Q1.Ma tahay wax soo saare ama kaliya shirkad ganacsi?
A1.Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo dharka dhaansiga, dharka dhaansiga carruurta iyo dharka qoob-ka-ciyaarka qaangaarka ah. waxaan leenahay kooxo xirfadlayaal ah oo kaamil ah oo in kabadan 17 sano khibrad u leh sameynta iyo sameynta suuq geynta.
Q2.Ma ii soo diri kartaa muunadda? Waa imisa khidmadda muunadda?
A2.Sambalka waa la heli karaa.Ujuurad tusaale ah ayaa lagu qaadi doonaa laba jibbaar qiimaha jumlada, laakiin waxaan kuu soo celin doonnaa qiimaha muunadda dheeriga ah haddii aad annaga dalbo amar.
Q3.Sidee loo dalbadaa?
A3.You waad noo soo diri kartaa baaritaan ama qandaraas ku saabsan alaabta aad jeceshahay, ka dib waxaan kuu soo diri doonaa faahfaahinta alaabtayada. Waxaan bixinaa qeexitaanka cabbirka ee dharka qoob-ka-ciyaarka, waxaad ka dooran kartaa cabbirka saxda ah shaxda cabbirka. Hadana haddii aad wax dhibaato ah ka qabto cabbirka, waad farriin u diri kartaa oo noo sheegi kartaa da'da, dhererka iyo miisaanka, waxaan ku siin karnaa talobixinta xirfad-yaqaannada ah.
Q4.Ma dhigi karaa calaamadeena / calaamadeena dharka? / Miyaan dooran karaa midab?
A4.Haa. Customization waa la soo dhaweynayaa. Haddii aad leedahay naqshad adiga kuu gaar ah, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah waxaanan kuu samayn karnaa muunad.
Q5.Waa maxay ku saabsan adeegga iibka kadib?
A5.1) Dhammaan alaabooyinka si adag ayaa loo hubin doonaa ka hor inta aysan xirxirin. 2) Alaabada Al si fiican ayaa loo buuxin doonaa ka hor inta aan la soo dirin 3) Haddii aanad ku qanacsanayn, waxaad heli doontaa jawaabteenna degdegga ah iyo xalka.
Q6. Waa maxay nooca dammaanadda ama dammaanadda ah ee aad ku siiso carruurtaada dharka qoob-ka-ciyaarka?
A6.Waxaan iibinaa alaab tayo sare leh oo lagu kalsoonaan karo. Kahor rarka, shaqaalahena Q&C waxay baaritaan faahfaahsan ku sameyn doonaan lebis kasta oo loogu talagalay macaamiisheenna si loo hubiyo tayada sare oo aan waligood loo dirin dhar jaban ama cilladaysan.
Calaamadaha kulul: Kabaha Xirfadlayaasha Pointe, Soosaarayaasha Naqshadeynta, Warshadda Shiinaha, Gawaarida, Tayada Sare, Qiimaha Jaban, Alaab-qeybiyeyaasha
Kabaha Ballet Point
kabaha ballet fashion
Kabaha Ballet Pu Leather
Kabaha Ballet Canvas
Kabaha Ballet Madax Leather
Kabaha Ballet Satin
Kabaha Xirfadlayaasha Baaskiil-1700